Nezvedu - Qingdao Aosheng Plastic Co., Ltd.
Kuenderera mberi nekuvandudza, Zadzisa chikumbiro chevatengi.
Qingdao Aosheng Plastic CO., Ltd.yakavakwa pa1999 gore uye yakatanga kutumira kunze kwenyika kubva muna 2008. Munguva yemakore anopfuura makumi maviri 'kukura, Iyo kambani yave nyanzvi yekugadzira iyo ine ruzivo rwekugadzira inoraswa auto / chikepe pendi inodzivirira akateedzana, inoraswa chivakwa inodzivirira akateedzana uye zvimwe zvine hukama masking akateedzana. Kuti uzadzise nemusika wakasiyana uye chikumbiro chevatengi, Qingdao Aosheng Plastic Kambani zvakare inorega kuedza kwekutsvaga zvinhu zvitsva.
Fekitori yedu inovhara nzvimbo ye30000㎡. Kusvika pari zvino, tine anopfuura makumi maviri michina, uye vanopfuura makumi mashanu vashandi vane ruzivo kurishandisa. Kuti udzivise kukamisikidzwa kwevashandi, mazhinji emachina akagadziridza kuita otomatiki michina. Kugona kwese kugadzirwa kwaAosheng ingangoita matani mazana mashanu / mwedzi. Yedu kambani inovimbisa kununura vatengi vedu chigadzirwa nenguva uye hapana kunonoka.
Qingdao Aosheng Plastic Company yatowana ISO9001, BSCI, FSC, Patent yeSplicing Masking Firimu, Patent ye Spray Paint Masking Firimu, Chitupa cheBasa Kuchengetedzwa, IPMS, zvichingodaro.Zvakare, kambani yedu zvakare ine yayo QC system yekutarisa mhando yechigadzirwa. Nyanzvi yekutengesa dhipatimendi yaizopindura nhau dzevatengi pakati pe24 maawa ekushanda. Yakakwira mhando chigadzirwa, yakakwana yekutengesa sevhisi uye yakasimba fekitori simba rinotibatsira kukunda yakawanda yevatengi yakareba-kwenguva mushandirapamwe hukama, kusanganisira imwe yepasirese inozivikanwa brand.
Panguva imwecheteyo, Qingdao Aosheng Plastic Company inoteerera zvakanyanya kudzidziswa kwevashandi, kuchengetedzeka kwevashandi, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kudzora Moto. Isu tiri pasi pekutonga kweanotarisira vatengi, anoona nezve nzanga uye anozvitarisira isu. Isu tinosimbirira yenzira yekusimudzira yekusimudzira.
Qingdao Aosheng Plastic Company vaizoedza nepose kuramba vari innovating, kutsvakurudza uye kukura kusvikira kuwana mutengi kugutsikana. Kana iwe uine chero mubvunzo, usazeze kutaura nesu. We pachokwadi vaitarisira pamwe nemi.